Marwada labaad ee Somaliland oo iyo wefti ay hoggaaminayso oo Hantiyay Taageeradii Kulmiye ee Xeebta iyo Awdal-Warbixin
Home WARARKA Marwada labaad ee Somaliland oo iyo wefti ay hoggaaminayso oo Hantiyay Taageeradii...
Awdal-(Berberanews)-Marwo Raxma Xaaji Muxumed Suldaan, Marwada labaad ee Qaranka Somaliland, ayaa todobaadkii dhammaaday waxay hawlgal isugu jira furitaanka Xafiisyada Xisbiga Kulmiye iyo dardargelintiisa ka waday Deeegaannada Gobolka Awdal.
Marwo Raxma oo 20kii Bisha Safarkeeda u kicitintay Tuulooyinka iyo Magaalooyinka ku teedsan Xeebta, ayaa waxaa ku wehelinayayMasuulliyiin xukuumadda iyo Xisbiga ka tirsani, Maamulka Gobolka iyo Xildhibaanno.
Marwadu waxay safarkeeda ka bilowday Deegaanka Jirjirka, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen boqollaal taageerayaasha Xisbiga Kulmiye ah, waxaannay Marwadu Xadhiga ka jartay Xafiis cusub oo Xisbigu ku yeeshay Jirjirka.
Marwadu waxay khudbad u jeedisay dadweynaha reer Jirjir oo ay uga mahadcelisay soo dhawaynta ay u sameeyeen, waxaanay tidhi, “Dhammaantiin waan idin salaamayaa reer Jirjir, aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaynta ballaadhan ee sharafta iyo quruxda leh ee aad nagu soo dhawayseen. safarkayagu waa mid aan ku dardargelinayno xafiisyadii ka furnaa Goobaha aanu marayno, sida aad noo soo dhawayseena codka waanu idiinka rabnaa reer Jirjirow.” ayay tidhi Marwada labaad ee Qaranka.
Marwadu waxay uga sii gudubtay Degmada Qulujeed oo ay xadhiga ka jartay laba xafiis oo Xisbiga Kulmiye ku yeelan doono degmada, waxaanay ka jeediisay khudbad”Qulujeed waa degmadii uu ka soo jeeday Madaxweynaheenii hore Daahir Rayaale Kaahin, waa degmo dawladnimada dhadhankeeda iyo karaamada garanaysa, magaalo mucaarid cod ugu soo hagaagmo marnaba maaha. waxaan idin leeyahay codku yuu inaga khasaarin, waxqabadka iyo horumarka aynu maanta hiigsanayno yaanu baydh inaga noqonin.
Marwada iyo weftiga ay hoggaaminaysaa waxay tegeenMagaalada Boon ee Gobolka Sool Salal halkaas oo aan loo kala hadhin soo dhawaynteeda, marwada oo dadweynaha la hadashay waxay tidhi, “Maalinta ay codka noqoto reer Boon waxaan ka rabnaa sidaa ay noogu soo baxeen inay codkana noogu huraan, oo aanay xisbi kale barbar dhigin, ee aanay reer Boon noqon islaantii dhiisha caanaha ku siday ee marka la weydiiyo Geel maad haysaa? haa, lo’o maad haysaa haa lahayd.” ayay tidhi Marwo Raxma.
Halkan ka daawo muuqaalka soo dhawayntii Marwada ee Jirjir, Qolujeed iyo Boon
Halkan ka daawo Muuqaalka soo dhawayntii Xariirad.
Previous articleHidda-side hore oo bidhaamiyay taariikhda Afrika
Next articleWasiirka Arrimaha Gudaha oo ka hadlay dil ka dhacay degmada Dila